Mingalarpar: October 2011
၁၉၄၅ ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက် မှ ၁၉၄၈ ဇန်န၀ါရီ ၄ ရက်နေ့အထိ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး သမိုင်းမှ အရေးကြီးသည့် ရက်စွဲအချို့....။
သခင်တင်မြ ၊ ဘုံဘ၀မှာဖြင့် ဒုတိယပိုင်း အမှား နှင့် အမှန် စာအုပ်
ပန်းရွှေပြည် စာအုပ်တိုက် ၊ ပထမအကြိမ် ၊ ၂၀၁၁ ဧပြီလ
စာမျက်နှာ ၄၄၇ - ၄၅၈ မှ ကူးယူတင်ပြထားပါသည်။
ရှေးဖြစ်စာတမ်း ၊ နှောင်းဖြစ်စာတမ်း ၊ ရှေးဟောင်း ရှေးဖြစ်စာတမ်း
ရာပြည့်စာအုပ်တိုက် ၊ တတိယအကြိမ် ၊ မေ ၂၀၁၁
စာမျက်နှာ ၁၀၃ - ၁၀၈ မှ ကူးယူတင်ပြထားပါသည်။
ကူးယူဖော်ပြခွင့်ပြုပါရန် သက်ဆိုင်သူများအား လေးစားစွာ ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
ကိုသန်း (ကြည့်မြင်တိုင်)၊ ဖဆပလအတွင်း အတူရှိခဲ့ကြစဉ်က ကွန်မြူနစ်နှင့် ဆိုရှယ်လစ်တို့၏ အလံလုပွဲတစ်ခု..။
စာရေးသူ - ကိုသန်း (ကြည့်မြင်တိုင်)
ကိုသန်း (ကြည့်မြင်တိုင်) ၊ နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံများ
ပင်ဝါးရုံစာပေ ၊ ပထမအကြိမ် ၊ ၂၀၀၉ နိုဝင်ဘာလ
ကိုသန်း (ကြည့်မြင်တိုင်) ၊ နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံများ - ၂
ပင်ဝါးရုံစာပေ ၊ ပထမအကြိမ် ၊ ၂၀၁၁ ဇွန်လ
စာရေးသူအကြောင်းကို နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံများ စာအုပ်မှ ကူးယူထားပါသည်။
ဖဆပလအတွင်း အတူရှိခဲ့ကြစဉ်က ကွန်မြူနစ်နှင့် ဆိုရှယ်လစ်တို့၏ အလံလုပွဲတစ်ခု..။
နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံများ - ၂ ၊ စာမျက်နှာ ၈၈ - ၉၂ မှ ကူးယူထားပါသည်။
အထက်ပါ စာအုပ်များကို အလွယ်တကူ မဖတ်ရှုနိုင်မည့် နိုင်ငံရပ်ခြားမှသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဖော်ပြခွင့်ပြုပါရန် သက်ဆိုင်သူများအား လေးစားစွာ ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
The WAVES Magazine
4/11 . October . 2011
စာမျက်နှာ ၁၃၁ - ၁၅၁ မှ ကူးယူဖော်ပြထားပါသည်။
The WAVES Magazine ကို အလွယ်တကူ မဖတ်ရှုနိုင်မည့် နိုင်ငံရပ်ခြားမှ စိတ်ဝင်စားသူများ ဖတ်ရှုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဖော်ပြခွင့်ပြုပါရန် ဆရာကျော်ဝင်း၊ ဆရာဦးထွေးမြင့် နှင့် အခြားသက်ဆိုင်သူများအား လေးစားစွာ ပန်ကြားအပ်ပါသည်။ ဆောင်းပါးကို ညွှန်းပေးသည့် သူငယ်ချင်းကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဆောင်းပါးအစတွင် ဖော်ပြထားသည့် အယ်ဒီတာအဖွဲ့၏ စကားဦးကိုလည်း နှစ်သက်မိသည်။